XOG:Shacabka Jowhar Oga Darnaatay Shabaab Arin Madaxweyne Xasan kusameeyay Saraakiil f |
XOG:Shacabka Jowhar Oga Darnaatay Shabaab Arin Madaxweyne Xasan kusameeyay Saraakiil f
clomid for sale, cheap clomid. Sida ay sheegayaan ila wareedyo xog Ogaal u ah Kacdoon ay sameyeen Saraakiil Xilalkooda oo dib oga celiyay Madaxweyne xasan sheikh horeyna ubixiyay Mdaxweynihi hore soomaaliya sheikh shariif ayaa haatan kataagan Jowhar.
Xaalada kacsanana ayaa laga soo sheegayaa magaaladaasi kadib markii saraakiil Frabadan oo katirsan kuwa Milateriga isaga baxayn magaalada ayadoo lasheegay in ka gadoodeynb xilal kaxayuubin oo kusameeyay xasan sheikh maxamuud.
Xogtaan ayaa raacineyso in saraakiishana habeenkii xalay isaga baxayn magaalada waxaana ay noqotay cabsida manta ugu badan heysato shacabka jowhar oo noqotay.
Lama oga halka kudanbeyntoonto Xaalka blse wararka ayaa tibaxaayo Gudoomiyaha Gobolka shabeellaha hoose ayaa wado dadaalo arintaasi ku xalinaayo wallow xasan sheikh oo arinkaasi kabiya diiday.
Saraakiishaan isaga baxay magaalada jowhar habeenkii xalay ayaa dhamantooda kawada tirsan guutada Kobaad ee milateriga Soomaaliya waxaana si dhab ah loo ogeyn halka u ruqaansadayn waxaana hore usii raacay Ciidamo farabadan ay hogaaminayeen.
Xogtaan wixii kusoo kordha badweyn kala soco.